WordPress: Tinye Ogwe Ozi Top | Martech Zone
WordPress: Tinye Ogwe Ozi Top
Sunday, November 27, 2011 Monday, November 28, 2011 Douglas Karr
Site na saịtị ọhụrụ ahụ, achọrọ m maka n'elu mmanya maka WordPress ruo oge ụfọdụ. Ikpeazụ anyị isiokwu imewe n'ezie nwere dum ngalaba na ike-akwatu na advertised anyị ndenye aha email. Nke a mere ka ọnụ ọgụgụ ndị debanyere aha mụbaa nke ukwuu nke mere na etinyegoro mbanye ndebanye aha ozugbo na isi isiokwu ahụ.
Ugbu a achọrọ m naanị a n'elu mmanya iji mee ka ndị na-agụ akwụkwọ nweta oge ọ bụla na isi ozi ọ bụla anyị chọrọ ichetara ha banyere… gụnyere akụkọ na ihe omume. Aga m ede nke a ozugbo na isiokwu anyị mana achọtara WP-Topbar, Akwukwo ogugu edere edere nke oma maka WordPress. E nwere ụfọdụ ndị ọzọ nọ ebe ahụ nwere atụmatụ ndị ọzọ… dị ka ozi na-agbagharị ma ọ bụ usoro nhazi ozi, mana ịdị mfe nke ngwa mgbakwunye a meriri ha.
Enwere m obi ụtọ na akaghị osisi mmanya n'elu elu nke ọdịnaya ọdịnaya ahụ; kama, ya dynamically eme na-egosi na ntọala na-agụnye igbu oge na ọsọ maka igosipụta ya… a n'ezie mma aka! Can nwere ike ijikwa agba (na ọbụlagodi eserese) nke ogwe, ozi ahụ, tinye njikọ, yana tinye CSS gị na ya. Nlekọta ọrụ ahụ nwekwara nlele ka ị nwee ike ihuchalụ mgbanwe gị niile tupu itinye ya na ndụ.
Rịba ama, e nwere ụfọdụ plugins n'elu mmanya n'elu na-akwụ ụgwọ ego… mana echere m na nke a bara uru karịa!
Melite: Emere m ụfọdụ mmelite na ngwa mgbakwunye ahụ. Ọ na-ebido ugbu a site na wp_footer karịa wp_head (nke ahụ bụ WordPress API ikwu okwu) na m emelitere div iji nwee NJ na styling iji dozie ogwe kama inwe ya ikwu. Wayzọ a, na mmanya ịnọ na-etinye ka ị pịgharịa gaa na ala na peeji nke.
Tags: ogwe oziozi mmanya ngwa mgbakwunyeogwe ngwaọrụn'elu mmanyatop mmanya ngwa mgbakwunyewordpress pluginwordpress n'elu mmanyawp_footerwp_isi
Slideshare - Nnukwu Giant nke Ahịa ọdịnaya
Nov 27, 2011 na 7:10 PM
Nov 27, 2011 na 7:40 PM
Bet nzọ, George!
Dee 11, 2011 na 1: 18 AM
Ogwe ozi dị elu na-apụta n'ezie.
ekele maka òkè!
Dee 11, 2011 na 1: 45 AM
Agbalịrị m njikọ gị ma ngwa mgbakwunye adịghịzi ebe ahụ. Ebee ka m nwere ike inweta ya Karr?
Sep 7, 2012 na 8: 51 AM
Gịnị kpatara nke a anaghị arụ ọrụ maka m? Agbalịrị m ngwa mgbakwunye a ọnwa isii gara aga ma enweghị m ike ịchọpụta otu esi eme ya. Ọ arụnyere n'ụzọ zuru oke na m jikwaa ntọala n'ụzọ ziri ezi m na-eche ma ọ na-egosi na home page ma ọ bụ na peeji nke id m melite ya na. Ugbu a, o were m ihe karịrị otu awa iji rụọ ọrụ. Afọ ejula m. Mmadu nyere aka!
Ya I setịpụrụ oge ndị ọzọ. (na millisecods) na ụbọchị kwa. Gịnị ka m na-atụ uche ya ugbu a?
Sep 7, 2012 na 9: 26 AM
Ikekwe ụfọdụ ụdị esemokwu na ngwa mgbakwunye ọzọ? Nwere ike ịnwale ịkwụsị niile plugins ma na-agba naanị onye ahụ iji hụ ihe na-eme.
Mar 19, 2013 na 1: 03 AM
Ya ọ rụrụ ọrụ mgbe ọ nwesịrị ọtụtụ ihe. Nke a mere ka ọ dị - ịtọgharịa na ndabara. Versiondị nke ugbu a na-arụ ọrụ na-enweghị nsogbu ọ bụla
Nov 26, 2012 na 5:41 PM
Daalụ maka òkè, naanị ihe m na-achọ.
Ọkt 21, 2013 na 5:08 PM
Daalụ maka nnukwu post. Anọ m na-achọ kpọmkwem maka nke a. Agbanyeghị m na - achọ “hello bar” ọzọ ma ọ dị ka ọ nweghị ọrụ m. Daalụ maka ozi a.